इटाली दुनिया मा आफ्नो भोजन को लागि प्रसिद्ध छ। यो देशमा यसलाई हामी सबै अब खुसी रेस्टुरा र भान्सा मा कुक मा आदेश सबैभन्दा स्वादिष्ट व्यञ्जन संग आएका छन् छ। इटालियन भोजन को Jewels एक सूर्य-सुकेको टमाटर छन्। तिनीहरूले हामीलाई रूपमा व्यापक लोकप्रियता देखि tiramisu वा पिज्जा "Margarita" को रूपमा खरिद म किन आश्चर्य। आखिर, यो उत्पादन कुनै पनि पकवान एक अद्वितीय स्वाद र जोर को सुगन्ध दिन सक्षम छ। यो खर्च हुनेछ भनेर सस्तो छैन, तर स्वाद प्रामाणिक इटालियन सूर्य-सुकेको टमाटर के छ हुनेछ कि एक तथ्य छैन बाहेक खैर, रसपूर्ण, तपाईंले लगभग सबै प्रमुख सुपरमार्केट को एक जार, फेला पार्न। नुस्खा तिनीहरूलाई, भाग्यवस, एक रहस्य छ, त्यसैले धेरै राम्रो विचार आफैलाई मा घर खाना पकाउनु।
ओवन वा विशेष ड्रायर मा, सूर्य मा: यस विनम्रता विभिन्न तरिकामा तयार छ। र नयाँ पकाउने प्रविधी को आगमन संग धेरै Housewives बनाउन सिकेका सूर्य-सुकेको टमाटर multivarka मा। यो पकाउने प्रक्रिया थप सरल र छिटो गर्नेछ। तर सिधै सूर्य-सुकेको टमाटर कारवाही को अनुक्रम विचार अघि, यो पकवान लागि आवश्यक सामाग्री सूची।
स्वाभाविक आफैलाई टमाटर यो। तिनीहरूले ठूलो हुँदैन। तिनीहरूले अङ्गुर resembling, तर मन र राउन्ड गर्नेहरूका लागि आदर्श हो। स्वादिष्ट र सूर्य-सुकेको प्राप्त गर्दै चेरी टमाटर। यस नुस्खा पनि विभिन्न जडीबुटी र मसाले को प्रयोग पनि समावेश छ। तिनीहरूले तरकारी विशेष, अद्वितीय स्वाद दिन। हामीले निम्न seasonings हुनेछ:
मरिच र नुन (यो शास्त्रीय);
सुकेको घाँस र ताजा (जस्तै, Rosemary, तुलसी, thyme, कुठरा, दिलकश, अजवायन, आदि) को रूपमा।
सुरु गर्न, टमाटर धोए र सुक्खा गर्नुपर्छ। यसबाहेक, तिनीहरूले बडा (क्रीम) हो भने, तिनीहरूलाई चौथाई मा, कट भने सानो - आधा। अब हामी multivarku लिन र फैलिनु तीन भागहरु: मुख्य कचौरा, स्टीम प्लेट र बाफ कप hinged। तिनीहरूलाई कटौती गर्ने तयार तरकारी फैलियो।
छुट्टै कचौरा मा तयार लाउने: 3:5उदाहरणको लागि, मरिच को एक चम्चा, 1.5 - नुन 2.5 - चीनी2को अनुपात मा मिश्रण मरिच, नुन र चिनी। स्वाद अन्तिम आवश्यकता, टमाटर खाना पकाउने प्रक्रिया मा बढी अम्लीय भन्दा तिनीहरूले मूल थिए हुन्छन्। समान रूप यो मिश्रण संग तरकारी छिडकना, त्यसपछि - जडीबुटी र चोट लसुन। हल्कासित तेल संग छिडकना।
"सेक्ने" मा multivarka मा सुकेको टमाटर तयारी गर्दै। तापमान 80-100 डिग्री सेट गरिएको छ। अवधिको लागि आफ्नै टमाटर को स्थिरता देख समय समयमा निर्णय गरेका छौं - तपाईं थप रसदार र meaty वा सुकेको तरकारी बढी चाहन्छन्। multivarka मा सूर्य-सुकेको टमाटर घन्टा को एक जोडी पछि तयार छन्।
वास्तवमा, खाना पकाउने पछि तपाईंले तिनीहरूलाई एकैचोटि खान सक्नुहुन्छ, तर तपाईँले भविष्यको लागि तिनीहरूलाई तयार गर्न चाहनुहुन्छ भने, यो तेल र जडीबुटी एउटा सानो जार आवश्यक हुनेछ। प्रत्येक तल केही तेल खन्याउन सक्नुहुन्छ मा, फेंक अलिकति चोट लसुन र जडीबुटी यसलाई मा, टमाटर, तेल को प्रसार तह र फेरि राख्नु मसला खन्याउन - ताकि छैन गर्न सक्छन् को शीर्ष पुग्न।
यसलाई पूर्ण पुरा भरिएको हुनुपर्छ। स्वाद र सुगन्ध शीर्ष लागि एक सानो balsamic सिरका ड्रप गर्न सक्नुहुन्छ। अब तपाईं Lids बन्द गर्न आवश्यक छ। फ्रिज मा त workpiece धेरै हप्ता भण्डारण गर्न सकिन्छ।
त्यो कसरी छिटो र multivarka मा सुकेको टमाटर तयार गर्न सजिलो छ। तपाईं साँच्चै आफ्नो पाक प्रयोग तिनीहरूलाई कदर गर्न सक्नुहुन्छ। यी टमाटर पूर्ण संग संयुक्त छन् टूना संग पास्ता, कुनै पनि पिज्जा, ब्रुस्चेट्टा लागि भर्नको रूपमा उपयुक्त थप्नुहोस्। तिनीहरूले इटालियन रोटी (ciabatta जस्तै), सलाद, stewed तरकारी र मासु सहित विभिन्न पेस्ट्री, तयार। र हरेक पकवान तिनीहरूले एक अद्वितीय स्वाद र स्वादिष्ट स्वाद दिन!
मासु लागि सस: एक नुस्खा। Gravies र मासुको लागि सस
को बियर कुकीहरू - पाक लागि एक सरल नुस्खा
Quince संग Plov: नुस्खा
डिजाइन र विवाह तालिकाको सजावट
समाज को एक खुट्टाोडी रूपमा "प्रहरी एकेडेमी": अक्षरहरू र अभिनेता को सफलता
किन वातावरण भनिन्छ। कसरी सप्ताह को तेस्रो दिन को नाम गरे?
को जाडो लागि पहेंलो टमाटर: व्यञ्जनहरु
अभिनेता बोरिस Khimichev। जीवनी, Filmography
एडी spurs, के गर्ने?
"Yezhov पहाड" - स्की रिसोर्ट। स्की जटिल समीक्षा "पहाड Yezhov"
एक रोचक समाधान: पुरातन मिश्रीहरूले को पिरामिड लागि विशाल ढुङ्गा ब्लक सारियो कसरी